फिफा वर्ष खेलाडीमा १० मनोनित, कुन कुन खेलाडी लिस्टमा परे ? – Tandav News
फिफा वर्ष खेलाडीमा १० मनोनित, कुन कुन खेलाडी लिस्टमा परे ?
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ श्रावण ९ गते बुधबार ११:४४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ ( रासस)
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले फिफा वर्ष खेलाडीका लागि १० जनाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ ।
फिफाले मंगलबार राति सन् २०१७–१८ का लागि १० खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो । फिफाले सार्वजनिक गरेको १० खेलाडीमा पार्चुगलका क्रिष्टियानो रोनाल्डो, अर्जेन्टिनाका लिओनल मेसी, फ्रान्सका केलियन एमबाप्पे, एन्टोनी ग्रिजम्यान र राफायल भाराने टपटेन सूचीमा परेका छन् ।
गत वर्षको जुलाई ३ (२०१७) बाट यो वर्षको जुलाई १५ सम्म खेलाडीले क्लब र राष्ट्रको लागि खेल्दा गरेको प्रदर्शनको आधारमा २५ खेलाडी मनोनयन गरेको फिफाले जनाएको छ ।
पोउवा चुनावकालागि ‘प्रजु प्यानल’का उम्मेदवार घोषणा